mairie-antananarivo – CUA : Fiarahabana nahatratra ny taona
CUA : Fiarahabana nahatratra ny taona
auteur 3 janoary 2017 Commentaires fermés
Niarahaba ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2017 ny Filan-kevitra Monisipaly sy ny ao amin’ny Kabinetran’ny Ben’ny Tanana. Nirary fahobiazana ho azy sy ny ankohonany ary koa fahasalamana izy ireo. Nisy ny fanolorana Fahatsiarovana ho an’ny Ben’ny Tanana nandritra izany.
Nanambara ny Filohan’ny Filan-kevitra Monisipaly Andriambahoaka Faustin fa na teo aza ny olana izay nianjady tamin’ny Kaominina nandritra ny taona 2016 dia betsaka kosa ny azo lazaina teo amin’ny fahomboazana satria lasa nitombo hery isika vokatry ny fiaraha-miasa miaraka amin’ny AVCOI ka ao anatin’izany indrindra ny nifidihanana manokana ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana ho Filohan’ny Fikambanambe izany; Betsaka koa ireo firenena avy any ivelany nifanaraka fa hiara-hiasa.
Nankasitraka sy naneho hafaliana ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana izay nanambara fa miombompo sy saina isika rehetra, manome fankasitrahana an’Andriamanitra, mahatsiaro tsy irery aho hoy izy ary henin-kanja henimboninahitra.
Nilaza ihany koa izy fa ity taona vaovao ity dia taonan’ny asa ary hidina matetika eny anivon’ny Boriboritany enina ny tenany hijery akaiky ny zava-misy izay manahirana ny vahoaka, indrindra ny tsena sy ny eny amin’ny faritra iva. Mila miasa miaraka isika hoy ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana fa tsy misy mahavita tena irery amin’ny fanarenana. Nohamafisiny fa ilaina ny ny fiarahamiasa amin’ny Syndicat, Filan-kevitra Monisipaly, Solombavambahoaka sy ireo mpiara miasa rehetra mba hiteraka vokatra. Rehefa misy ny olana dia tsy maintsy misy ny vahaolana hoy ihany izy nanohy ny teniny.
AO ANATY » Serasera